Dowladda Somaliya ayaa shaaca ka qaaday maalmaha soo socda in dalka la keeni doono maxaabiis – STAR FM SOMALIA
Dowladda Somaliya ayaa shaaca ka qaaday maalmaha soo socda in dalka la keeni doono maxaabiis kala duwan oo laga soo daayay xabsi ku yaallo dalka India.
Hadalkaan ayaa waxaa sheegay Madaxweynaha Somaliya Maxamed C/laahi Farmaajo, xilli uu ka hadlaayay Magaalada Boosaaso, wuxuuna sheegay in maxaabiista qaarkood iminkaba ay degan yihiin Hotelo oo la soo daayay.
Farmaajo ayaa sheegay maxaabiista kale ee dhiman oo maalmaha soo socda la soo dayn doono, balse hadda ay jiraan kuwa la soo daayay oo degan Hotelada, wuxuuna tilmaamay ku dhawaad 100 ruux oo Maxaabiis ah, halmar in dalka la wada keeni doono.
“Arintii maxaabiista, hawshaasi waa gabo gabo, 10 berri gudahooda waxaa noogu imaan doono dad gaaraya 100 ruux oo aan soo daynay, qaarkood waa soo saarnay oo Hotelo ayeey degan yihiin, kuwa kale ayeey sugayaan si diyaaradii keeni laheyd ay u soo raacaan oo halmar ay u soo wada baxaan.” Ayuu yiri Madaxweyne Farmaajo.
Dowladda Somaliya ayaa horay uga guuleysatay in xabsiyo ku yaallo dalalka India, Itoobiya iyo Sychelles laga soo daayo maxaabiis kala duwan oo ku xirnaa halkaasi.
Dhalinyarada ku xiran xabsiyada ku yaallo dalka India, ayaa waxaa ay u badan yihiin kuwa lagu eedeeyay inay ka mid ahaayeen Burcad badeeda Somalida, inkastoo qaarkood la xukumay oo xukunadii ay u dhamaadeen.
Somaliya iyo India ayaa horay u kala saxiixday heshiis ku saabsan dhanka maxaabiista labada dal.